तेल उत्पादनमा रुसले उछिन्यो साउदीलाई, अरब देशहरु संकटमा………. – Khabar PatrikaNp
तेल उत्पादनमा रुसले उछिन्यो साउदीलाई, अरब देशहरु संकटमा……….
August 23, 2020 93
मस्को (एजेन्सी)। यसै वर्ष मार्चमा साउदी अरब र रुसबीच तेलको मूल्यलाई लिएर विवाद भएको थियो। साउदी अरब रुसले तेल कम उत्पादन गरोस भन्ने चाहन्थ्यो, किनकी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य लगातार घटिरहेको थियो। घट्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न साउदीले रुसलाई तेल उत्पादनमा कटौती गर्न भनेको थियो। तर, रुसले साउदीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो।
रुसले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि रिसको झोंकमा साउदीले पनि आफ्नो तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गर्यो र तेलको मूल्यमा छुट दिने पनि बतायो। जब पुरा संसार कोरोनाका कारण ठप्प भएको थियो, साउदीले यस्तो बेला यो निर्णय लिएको थियो। दुबै देशहरु एकअर्कामाथि तेलको मूल्य घट्नुमा आरोप लगाइरहेका थिए। रुसको सरकारी टेलिभिजनले आफ्नो मुद्रा रुबेलमा आएको गिरावटको कारण साउदी भएको बताएको थियो।
उता साउदीले पनि अप्रिलमा साउदीको तल कम्पनी अरामकोले हरेक दिन एक करोड २० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने निर्णय गर्यो। यो रुससँग भएको सम्झौताको तुलनामा २६ प्रतिशत धेरै उत्पादन थियो। साउदीलाई लागेको थियो, रुससँगको मूल्य युद्धमा आफ्नो जित हुनेछ।
गएका तीन वर्षहरुमा तेलको संसारमा दुई महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु भएका छन्। र यसको प्रभाव व्यापक परेको छ। पहिलो परिवर्तन, अमेरिकामा तेलको उत्पादन बढेको छ। यो उत्पादन यति बढेको छ कि अमेरिका सबै भन्दा ठूलो तेल आयतकर्ताबाट संसारको महत्वपूर्ण तेल निर्यातक देश बनेको छ।
दोस्रो तेलको मूल्य स्थ्रि राख्नका लागि रुस र साउदी अरबबीचको सहयोग। अमेरिका, रूस र साउदी अरब दुनियाका तीन सबैभन्दा ठूला तेल उत्पादक देश हुन्। पहलो नम्बरमा अमेरिका छ, र दोस्रो नम्बरका लागि रूस(सऊदीकाबीच प्रतिद्वंद्विता चलिरहन्छ। रूस र साउदी अरबबीचको सहयोग हालका दिनहरुमा नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।
तेल उत्पादक देशहरुको संगठन ओपेकमा साउदीका दबदबा सबैभन्दा धेरै छ। मार्च महिनामा साउदी अरबले ओपेकको माध्यमबाट कोरोनका कारण तेलको मागमा आएको ठूलो कमीको कारण तेल उत्पानमा कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
रूस ओपेकको सदस्य होइन। उसले साउदीको यो प्रस्ताव मान्न अस्वीकार गर्यो। यसपछि यी दुई देशबीच तेलको मूल्यलाई लिएर मूल्य विवाद शुरु भयो।
अमेरिकाको शेल ओयल साउदी र रूस दुबेका लागि चुनौती हो। तर शेल ओयलका उत्पादन महंगो हुन्छ। तर शेल ओयलको उत्पादनका कारण नै अमेरिका दुनियाको सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकबाट सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक देश बनेको छ।
शेल ओयल र ग्यास उत्पादन महंगो भएकाले रूसलाई लाग्छ कि उसको बाज़ारमा कसैले चुनौती दिन सक्दैन। पारम्पारिक कच्चा तेलको तुलनामा ९जो रूस र साउदी अरबमा छ) शेल ओयल चट्टानहरुको बिचबाट निकालिन्छ।
पारम्पारिक कच्चा तेल ६०) फिटको गहराईबाट निकालिन्छ। जबकि शेल ओयलको उत्पादन जटिल हुन्छ। २०१८ मा अमेरिका साउदी अरबलाई उछिनेर दुनियाको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक देश बनेको थियो। अमेरिकाको यस उभारको असर पनि साउदी र रूसको तेल बजारमा पर्यो।
कोरोनको महामारी शुरु भएपछि तेलको माँगमा निकै गिरावट आयो। यस गिरावटलाई हेरेर साउदी अरब र रूसलाई ओपेक र ओपेक प्लसमा तेल उत्पादनलाई लिएर ठूलो कटौतीमा सहमति बनाउनु पर्यो। अमेरिकालाई पनि आफ्नो उत्पादनमा हरेक दिन २० लाख ब्यारेल कटौती गर्नुपर्यो। तर अमेरिका र रूसको तेल उत्पादनको निर्यात कम भए पनि त्यति फरक पर्दैन जति साउदी अरबलाई पर्छ। साउदी अरबको अर्थव्यवस्था तेलमा निर्भर छ र तेलको बजार जब प्रभावित हुन्छ उसको दबदबा हल्लिन्छ। र भविष्यलाई लिएर चिन्ता हुन्छ।
साउदीको तेल उत्पादन र निर्यातलाई रूसका साथै अमेरिकाबाट कडा चुनौती दिइएको छ। पहिला अमेरिकाले साउदीलाई तेल उत्पादनको मामिलामा दोस्रो स्थानमा धकेलियो, र अब रूसले साउदीलाई तेस्रँे स्थानमा पुर्याइदिएको छ। जोइन्छ अर्गनाइज़ेशन डेटा इनिशिएटिभ (जेओडीआई) का अनुसार रूसले जून महिनामा तेल उत्पादनको मामिलामा साउदी अरबलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याइदिएको छ।
यसका साथै रूस अमेरिकापछि तेल उत्पादनको मामिलामा दुनियाको दोस्रो सबैभन्दा देश बनेको छ। जेओडीआईका अनुसार जून महिनामा रूसको तेल उत्पादन हरेक दिन ८.७८८ मिलियन ब्यारेल रह्यो जबकि साउदी अरबको मात्र ७.५ मिलियन ब्यारेल रहयो।
जूनमा अमेरिका तेल उत्पादनको मामिलामा शीर्ष स्थानमा रह्यो। जेओडीआईका अनुसार जून महिनामा अमेरिकामा तेलको उत्पादन १०.८७९ मिलियन ब्यारेल प्रति दिन रह्यो। साउदी अरबको तेल निर्यातमा पनि लगातार कमी आइरहेको छ। जून महिनामा साउदीको तेल निर्यात हरेक दिन ५० लाख ब्यारेलबाट तल आयो। जेओडीआईका अनुसार मे महिनाको तुलनामा जूनमा उसको तेल निर्यातमा १७.३ प्रतशित गिरावट आयो।
Prevधार्मिकस्थल पाथीभरामा दुई वर्षको अवधिमा तीर्थयात्रीहरुले भेटीपातीको रुपमा चढाएका ६८ तोला सुन संकलन
काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १७ सम्म निषेधाज्ञा हुने.!
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34286)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34102)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20280)
वडाध्यक्ष को बाइकमा आएका नेकपा कार्यकर्ताले खुँ’डा हा’नेर ह’त्या गरे अमृतको Enews Nepali
भोलिदेखि सुरु श्रीस्वस्थानीको ब्रत किन बस्ने ? यस्तो छ कारण !
भाइरल अर्जुन विक पक्राउ, उनको डेरामा पुग्दा देखियो यस्तो, घरभेटीले सुनाइन् वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्)